सोधिने प्रश्न - BancaNEO
NO कुन देशमा अवस्थित छ?
NEO ले सम्पूर्ण वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै विश्वभरि ग्राहकहरुलाई डिजिटल बैंकि solutions समाधान प्रदान गर्दछ।
तपाईको नागरिकता वा वित्तीय इतिहासलाई ध्यान नदिई तपाईले हामीसँग खाता खोल्न सक्नुहुन्छ, तर हामीसंग ती देशहरूको सूची छ जुन हामी ग्राहकहरूलाई जहाजमा लिदैनौं। तपाइँले हाम्रो समर्पित वेब पृष्ठमा कालोसूचीबद्ध क्षेत्रको पूर्ण सूची फेला पार्न सक्नुहुन्छ: "कालोसूची गरिएको क्षेत्राधिकार ".
म कसरी साइन अप गर्न सक्छु?
NEO खाताको लागि आवेदन दिन सरल छ र टाढाबाट पनि गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोग प्रक्रिया सुरू गर्न, क्लिक गर्नुहोस् "व्यक्तिगत खाता खोल्नुहोस्" र आवेदन फारममा अगाडि बढ्नुहोस्। निवेदन फारम बुझिसकेपछि तपाईको केस हाम्रो पालना समीक्षामा जानेछ।
यस चरणमा -7-१० व्यवसाय दिन लाग्न सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, हामी तपाईंलाई हाम्रो नियामक आवश्यकताहरूको अनुसार सबै पूरा गर्न अतिरिक्त जानकारी प्रदान गर्न सोध्न सक्छौं।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंको कागजातहरू जाँच गरिसके पछि र तपाईंको खाता खोलियो, तपाईं NEO बाट ईमेल सेटअप गर्नुहोस् पासवर्ड सेटअप लिंकको साथ।
लिंक २h घण्टाको लागि मान्य हो र यसको म्याद समाप्त भएपछि तपाईंले हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गरेर नयाँ अनुरोध गर्नुपर्दछ bancaneo@protonmail.ch।
तपाईंको पासवर्ड सेट भएपछि, कृपया गुगल अनुप्रयोग वा एप्पलस्टोरमा जानुहोस् हाम्रो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न।
खाता खोल्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणले हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोगमार्फत तपाईंको पहिचान प्रमाणीकरण गर्दैछ।
तपाईंको स्मार्टफोनसँग फ्रन्ट क्यामेरा हुनुपर्दछ। कृपया तपाईंको पासपोर्ट वा एक राष्ट्रीय आईडी पनि तयार छ।
आईडी प्रमाणिकरण भनेको के हो?
यो एक पहिचान प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो जुन हाम्रो पार्टनर Onfido द्वारा संचालित छ, एक पटक भिडियो कल मार्फत प्रदर्शन गरिएको।
म कसरी भिडियो आईडी प्रमाणिकरण कल पूर्ण गर्न सक्छु?
हाम्रो पार्टनर ओन्फिडोले एक वास्तविक, सुरक्षित र सुरक्षित सुविधाजनक डिजिटल आईडी प्रमाणिकरणको लागि वास्तविक समयमा, विश्वको कुनै पनि ठाउँमाबाट विकसित गरेको छ।
तपाईको एक-समय आईडी प्रमाणिकरण प्रक्रिया सुरू गर्नका लागि कृपया तपाईको NEO मोबाइल अनुप्रयोगलाई तपाईको स्मार्टफोनबाट लग ईन गर्नुहोस्, तपाईको इ-मेल ठेगाना र पासवर्ड प्रयोग गरेर।
भिडियो कलको बखत तपाईं आफ्नो राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटोहरू लिनुहुनेछ, सेल्फी पाउनुहुनेछ, तपाईंको टाउकोलाई दायाँ र बायाँ सार्नुहोस् र केही संख्याहरू उच्चारण गर्नुहुनेछ, जुन तपाईंलाई प्रणालीले दिन्छ। यो तपाइँको समय को एक मिनेट भन्दा अधिक लिन छैन।
यहाँ भिडियो कलका लागि आफैंलाई कसरी तयार गर्ने बारे केही सुझावहरू छन्:
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं शान्त ठाउँमा कडा इन्टर्नेट जडान र राम्रो प्राकृतिक प्रकाशको साथ हुनुहुन्छ।
तपाईंको नागरिकताको देश चयन गर्नुहोस्, कस्तो प्रकारको कागजात तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जाँच गर्नुहोस् र यो तयार छ।
महत्वपूर्ण: तपाईं एक राष्ट्रीय परिचयपत्र वा पासपोर्टको साथ प्रमाणिकरण पास गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं EU निवासी हुनुहुन्छ भने र राहदानी मात्र यदि तपाईं गैर ईयू निवासी हुनुहुन्छ भने।
भिडियो आईडी प्रमाणिकरण कल किन आवश्यक छ?
साचेलसँगको एनईओको लिथुआनियाको नेश्नल बैंकको सुपरिवेक्षण सेवा विभाग द्वारा जारी इजाजतपत्र छ र इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्था इजाजतपत्र एनआरआर प्रदान गरिएको छ। २,, एक भुक्तानी प्रणाली सहभागी कोड एनआरको साथ। 28०30600००, र लिथुआनियाली गणतन्त्रको कानून बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ, ईयू निर्देशक (२०० / / ११० / ईसी) र EU- निर्देशक (२०१//२2009।)) को अनुसार EU- विस्तृत भुक्तान सेवाहरू।
हामीले कानूनी रूपमा तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छ हामीले तपाईंको लागि साचेल खाता खोल्न अघि।
भिडियो कल मार्फत आईडी प्रमाणीकरण प्रक्रिया कानूनी रूपमा अनुरूप टाढाको पहिचान प्रक्रिया हो, जुन पछिल्लो बैंकि regulations नियम र कानूनको साथसाथै एन्टी मनी लाउन्डरिंग ऐन (एएमएल) लाई मन्जूरी गर्न डिजाइन गरिएको हो।
एनईओ सेवाहरू प्रयोग गर्न म कति वर्षको हुनुपर्दछ?
यस समयमा, NEO ग्राहक बन्नको लागि न्यूनतम उमेर १ is हो।
हामी भविष्यमा यसलाई तल झार्न काम गर्दैछौं, युवा पुस्ताहरूका लागि उत्पादनहरू विकास गर्दै।
NEO चल्ती खाता
NEO व्यापार खाता कहाँ उपलब्ध छ?
व्यवसायका लागि एनईओ हाल कम्पनीहरूका लागि उपलब्ध छ जुन दर्ता भएका छन् र यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) वा स्विजरल्याण्डमा शारीरिक उपस्थिति छन्।
यसले निम्न देशहरू समावेश गर्दछ:
अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, क्रोएसिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जिब्राल्टर, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इटली, लाटभिया, लिच्टेनस्टीन, लक्जमबर्ग, माल्टा, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल , रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन, संयुक्त अधिराज्य।
यदि मेरो देश अझै समर्थित छैन भने म के गर्न सक्छु?
हामी तपाईंको आवेदन हाम्रो प्राथमिकता प्रतिक्षा सूचीमा थप्नेछौं र तपाईंलाई हाम्रो सेवाहरू तपाईंको देशमा उपलब्ध हुने बित्तिकै सूचित गर्नेछौं।
म कसरी खाता खोल्न सक्छु?
तपाई सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत or व्यापार व्यक्तिगत / व्यवसाय खाता खोल्ने फारम बुझाउँदै खाता, जुन तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
फारम बुझाइए पछि, यसले अनुपालन जाँचहरू पूरा गर्न र तपाईंको खाता खोल्न -7-१० व्यवसाय दिन लिन सक्दछ।
व्यक्तिगत वा व्यापार खाता खोल्न कुन कागजातहरू आवाश्यक हुन्छन्?
तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा आवश्यक कागजातहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुनेछ:
कागजातहरू व्यक्तिहरूको लागि सेट: यहाँ क्लिक
कागजातहरू व्यवसायका लागि सेट: यहाँ क्लिक
लाभदायक मालिकहरू र कम्पनीका निर्देशकहरूको लागि के आवश्यकताहरू छन्?
एक NEO व्यापार खाता खोल्नको लागि, हामीले तपाईंको कम्पनीको निर्देशकहरू र प्राथमिक शेयरधारकहरूको विवरणहरूको पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
यो नीति "तपाइँको ग्राहकलाई थाहा पाउनुहोस्" (KYC) नियामक प्रक्रियाको साथ अनुरूप छ, जसले व्यवसायहरूलाई यसको ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईले आफ्नो व्यक्तिको विवरण प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ जो तपाईको व्यवसायको २ shares% भन्दा बढि संचयी सेयरको स्वामित्व राख्दछन्।
यी शेयरधारकहरू र निर्देशकहरूले आधिकारिक आईडीको उच्च-गुणको फोटो प्रदान गर्न आवश्यक छ, जुन कम्तिमा अर्को तीन महिनाको लागि मान्य हो। तपाईं तिनीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरूको आईडी चेक स्वायत्त रूपमा पेश गर्न वा तिनीहरूको तर्फबाट कागजातहरू अपलोड गर्न।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी थप कागजातहरू सोध्न सक्छौं।
हामी कस्तो प्रकारको खाताहरू प्रस्ताव गर्छौं?
तपाइँको मास्टर खाता EUR मा खोलिएको छ, एक अद्वितीय IBAN र BIC संग आउँदछ, र SEPA भुक्तानीहरूको लागि मात्र डिजाइन गरिएको छ।
त्यहाँ एक साझा IBAN मार्फत विभिन्न मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरण को लागी अतिरिक्त खाताहरु खोल्ने संभावना छ।
अन्य मुद्राहरूमा खाताहरू अर्डर गर्न, कृपया एक स्विफ्ट अर्डर फारम बुझाउनुहोस्, र हामी तपाईंको बैंकिंग आवश्यकताहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समाधानको साथ तपाईंलाई फिर्ता भेट्नेछौं।
SWIFT अर्डर फारम
NEO ले अनलाइन बैंकिंग सेवाहरू प्रदान गर्दछ?
हो कुनै व्यक्तिगत वा व्यवसाय आईबीएएन खाता NEO को साथ खोलिएको हाम्रो अनलाइन बैंकि to सेवाहरूमा नि: शुल्क पहुँच समावेश गर्दछ।
के म मेरो स्मार्टफोनबाट सीधा मेरो एनईओ खाता प्रबन्ध गर्न सक्छु?
हो, तपाईं सजिलैसँग हाम्रो मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग (आईओएस र एन्ड्रोइडका लागि साचेल) डाउनलोड गरेर आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत खाताको लागि तपाईंको एनईओ पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँ यहाँ अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
आईओएस र एन्ड्रोइड
IBAN के हो?
एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता नम्बर (IBAN) भनेको राष्ट्रिय सिमानामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाताहरू पहिचान गर्न मानक कोड हो।
एक यूरोपीयन IBAN अधिकतम २ al अक्षरांकीय वर्णहरू समावेश गर्दछ।
कुनै पनि व्यवसाय वा व्यक्तिगत NEO खातासँग यसको लागि विशिष्ट IBAN तोकिएको हुन्छ।
म मेरो IBAN कहाँ पाउन सक्छु?
तपाईं तलका चरणहरू लिएर आफ्नो खाता विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ:
NEO वेब ग्राहक कार्यालय
N तपाइँको NEO खातामा साइन इन गर्नुहोस् र तपाइँको स्क्रिनको बाँया पट्टि "खाता" मेनूमा जानुहोस्
Acc "खाताहरू" पृष्ठ
Needed आवश्यक मुद्रा छनौट गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग दुई वा बढी मुद्रा खाताहरू छन्)
Fund कोष निर्देशन ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्
Accounts उपलब्ध खाताहरूबाट एउटा चयन गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
NEO मोबाइल अनुप्रयोग
Your तपाईंको पासकोडको साथ साइन इन गर्नुहोस् र आवश्यक मुद्रा छनौट गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग दुई वा बढी मुद्रा खाताहरू छन्)
Funds "कोष जोड्नुहोस्"
मेरो NEO खातामा आगमन स्थानान्तरणहरू प्राप्त गर्न मैले के विवरणहरू प्रदान गर्नुपर्छ?
तपाईंको NEO खातामा रकम प्राप्त गर्न, तपाईंले भुक्तानीकर्तालाई तपाईंको पूरा खाता विवरणहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ।
यी तपाइँको NEO ग्राहक कार्यालय मा पाउन सकिन्छ:
- तपाईंको NEO खातामा साईन ईन गर्नुहोस् र तपाईंको स्क्रिनको बायाँ पट्टि "खाताहरू" मेनूमा जानुहोस्
The आवश्यक मुद्रा छनौट गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग दुई वा बढी मुद्रा खाताहरू छन्)
Fund कोष निर्देशन ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछि उपलब्ध खाताहरूबाट एउटा छनौट गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। खाता विवरणहरू, जस्तै मुद्रा, बैंक, IBAN, SWIFT BIC, र लाभार्थी नाम देखाईनेछ।
- तपाईंको पासकोडको साथ साइन इन गर्नुहोस् र आवश्यक मुद्रा चयन गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग दुई वा बढी मुद्रा खाताहरू छन्)
। "कोष जोड्नुहोस्"। त्यस पछि उपलब्ध खाताहरूबाट एउटा छनौट गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। खाता विवरणहरू, जस्तै मुद्रा, बैंक, IBAN, SWIFT BIC, र लाभार्थी नाम देखाईनेछ।
म कसरी नयाँ मुद्रा खाता खोल्न सक्छु?
म अब प्रयोग नगर्ने मुद्रा खाता कसरी बन्द गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहानुहुन्छ भने, केवल हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीमा सम्पर्क गर्नुहोस् bancaneo@protonmail.ch तपाईको दर्ता गरिएको इमेलबाट, र खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्नुहोस्।
कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् कि थप शुल्कहरू लागू हुन सक्छ।
तपाईं हाम्रो ट्यारिफ योजनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
म कसरी मेरो बन्द खाता पुन: सक्रिय गर्न सक्दछु?
दुर्भाग्यवश, बन्द गरिएको छ कि एक खाता पुन: सक्रिय गर्न को लागी कुनै संभावना छैन। यदि तपाइँ फेरि हाम्रो सेवाहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया व्यक्तिगत वा व्यापार खाता आवेदन फारम बुझाउँदै पुन: आवेदन दिनुहोस्।
म कसरी मेरो NEO खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छु?
तपाईको खातामा रकम प्रदान गर्न हालै उपलब्ध विकल्प बै a्क स्थानान्तरण मार्फत हो।
तपाईं निम्न चरणहरू पालना गरेर तपाईंको खाता कोष निर्देशनहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ:
नोट: यदि तपाई EE मा अर्को SEPA द्वारा मान्यता प्राप्त यूरोपीय बैंक खाता तपाईको NEO खातामा स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले SEPA स्थानान्तरण गरिरहनु भएको छ तपाईको बैंकले लगाईएको कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क बाट बच्न।
यो पैसा तपाईंको साचेल खातामा १- 1-3 व्यवसाय दिन भित्र जम्मा हुनेछ।
म कसरी क्रेडिट / डेबिट कार्ड मार्फत मेरो NEO खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छु?
दुर्भाग्यवस, यो विकल्प यस समयमा अनुपलब्ध छ।
म कसरी मेरो फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना, दर्ता ठेगाना वा अन्य व्यक्तिगत डेटा परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईंको सम्पर्क विवरण वा व्यक्तिगत / व्यापार डाटा परिवर्तन गर्नका लागि कृपया हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् bancaneo@protonmail.ch
म कसरी बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छु?
हामी हाल यो सुविधा हाम्रो अनलाईन बैंकि platform प्लेटफर्ममा कार्यान्वयन गर्न काम गर्दैछौं ताकि तपाईंलाई तपाईंको बैंकिंग विवरणहरूमा द्रुत र सजिलो पहुँचको लागि।
यो उपलब्ध नभएसम्म, तपाईं हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गरेर खाता विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ bancaneo@protonmail.ch, आवश्यक अवधि र इमेलमा कथनको रुचाइएको ढाँचा संकेत गर्दै।
म कसरी गुनासो पेश गर्न सक्छु?
गुनासो तीन च्यानल मार्फत बुझाउन सकिन्छ:
१. हाम्रो कार्यालयको ठेगानामा दर्ता गरिएको मेल पठाइयो MM BITINVEST OU, Naituse tn 1, टार्टू , 50409, इस्टोनिया
०।। इ-मेल bancaneo@protonmail.ch;
Online. अनलाइन फारम यहाँ
हामी हाम्रा ग्राहकहरुबाट कुनै पनि रचनात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाको स्वागत गर्दछौं र तपाईले अनुभव गर्नु भएको मुद्दा / हरूको विस्तृत विवरण प्रदान गर्नका लागि कृपया अनुरोध गर्छौं। यसले हामीलाई तुरून्त उचित कार्य गर्न मद्दत गर्दछ।
लगईन र पासवर्ड
म कसरी मेरो डिजिटल बैंकमा लग इन गर्न सक्छु?
तपाईं सजीलै होम पेजमा नेभिगेसन बारमा अवस्थित लगइन बटन क्लिक गरेर आफ्नो डिजिटल बैंक खाता पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ:
लग ईन गर्नका लागि कृपया तपाईको आधिकारिक इ-मेल ठेगाना र पासवर्ड तपाईको खातामा सेटअप गर्नुहोस्।
म कसरी आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नका लागि कृपया हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् info@vn0.9ce.myftpupload.com
म कसरी मेरो लगईन ई-मेल परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईको सम्पर्क विवरणहरू परिवर्तन गर्नका लागि कृपया एक भरिएको सम्पर्क विवरण परिवर्तन फारम (फारममा लिंक) पठाउनुहोस् हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीमा info@vn0.9ce.myftpupload.com
के मेरो व्यवसाय खाताको लागि त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन्?
हो, तपाईको ब्यापार खातामा अतिरिक्त प्रयोगकर्ता थप्ने सम्भावना छ।
कृपया हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् info@vn0.9ce.myftpupload.com सहयोगको लागि।
२ एफए (दुई-कारक प्रमाणीकरण) के हो?
NEO मा हामी एक उन्नत प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि लक्ष्य राख्छौं, जबकि उच्च सुरक्षा मापदण्डहरू कायम राख्दै। यही कारणले गर्दा हामीसँग तपाईंको NEO खाताको लागि दुई-कारक प्रमाणीकरण (२ एफए) छ, जसले सुरक्षाको अतिरिक्त तह थप गर्दछ जुन तपाईंको खातालाई अनधिकृत पहुँचबाट बचाउँछ र तपाईंको पैसालाई जहिले पनि सुरक्षित राख्छ।
२ एफएको साथ तपाईले दुबै पासवर्ड र ओटिपी (एक-समय पासवर्ड) तपाईलाई पठाउँनु पर्छ तपाईले प्रत्येक पटक तपाईको एनईओ खातामा साईन ईन गर्नुका साथै तपाई बाहिर जाने स्थानान्तरणको समयमा।
दुई-कारक प्रमाणीकरण (२ एफए) प्रयोगकर्ता गाइड
भुक्तानी र लेनदेन
मेरो एनईओ खाताबाट पैसा हस्तान्तरण गर्न कति समय लाग्छ?
बहिर्गमन स्थानान्तरणहरूको लागि प्रशोधन समयहरू स्थानान्तरणको प्रकारमा निर्भर हुन्छ।
आन्तरिक प्रणाली स्थानान्तरण तत्काल छन्। SEPA स्थानान्तरणहरू १-२ व्यवसाय दिनहरू बीचमा लिन्छन्।
SWIFT स्थानान्तरणले -3--5 व्यावसायिक दिनहरू लिन सक्दछ।
म EUR बाहेक अन्य मुद्रामा स्थानान्तरण पठाउन / प्राप्त गर्न चाहान्छु, मैले के गर्नु पर्छ?
EUR भन्दा अन्य मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमन / आगमन बैंक स्थानान्तरणहरू केवल हाम्रो साझा IBAN सेवा मार्फत उपलब्ध छन्।
मैले यसको पूर्ण रकममा स्थानान्तरण प्राप्त गरिन। थप शुल्कहरू लिइयो?
जब तपाईं एक बैंक ट्रान्स्फर मार्फत तपाईंको NEO खातामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ हामी कुनै शुल्क लिदैनौं।
जहाँसम्म, एक अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्दा, प्रेषकले भोजमा बाहिर जाने स्थानान्तरण शुल्कहरू कभर गर्ने पार्टी छनौट गर्न सक्दछ।
थप रूपमा, SWIFT स्थानान्तरणहरू प्राप्त गर्दा, संवाददाता (मध्यस्थ) बैंकले प्रशोधन शुल्क घटाउन सक्छ, त्यसैले सानो रकम तपाईंको खातामा क्रेडिट गर्न सकिन्छ।
मैले आगमन स्थानान्तरण प्राप्त गरेन। मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंलाई पठाएको स्थानान्तरण तपाईंको खातामा जम्मा भएको छैन भने, तपाईंले प्रेषकबाट भुक्तानी पुष्टि प्राप्त गर्नुपर्नेछ र हाम्रो समर्थन टोलीलाई यहाँ पठाउनुपर्नेछ। info@vn0.9ce.myftpupload.com
मैले गलत IBAN मा स्थानान्तरण गरें। मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंले गलत आईबीएएन मा स्थानान्तरण गर्नुभयो भने, कृपया तुरून्त हाम्रो समर्थन टोलीलाई सूचित गर्नुहोस् bancaneo@protonmail.ch र तिनीहरूलाई भुक्तान सम्झना सुरु गर्न सोध्नुहोस्।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि ट्रान्सफर पहिले नै प्रापकको खातामा जम्मा भएको छ भने हामी लेनदेन उल्टाउन सक्षम हुनेछैनौं। यस अवस्थामा, हामी प्राप्तकर्तालाई सिधा फिर्ताको लागि सम्पर्क गर्न सल्लाह दिन्छौं।
म कसरी अर्को NEO खातामा स्थानान्तरण गर्न सक्छु?
एक आन्तरिक स्थानान्तरण गर्न, तपाईलाई केवल प्रापकको छोटो खाता संख्या चाहिन्छ।
तपाईंको ग्राहक कार्यालयमा "आन्तरिक स्थानान्तरण" भुक्तानी प्रकार छनौट गर्नुहोस्, खाता नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, र प्रणाली स्वचालित रूपमा डेटाबेस खोजी गर्दछ। बाँकी रहेको लेनदेनको रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्। स्थानान्तरण तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेछ।
म कसरी प्रीपेड कार्ड अर्डर गर्न सक्छु?
तपाईं यो लिंक अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ प्रिपेड कार्ड अर्डर गर्नुहोस्, जुन तपाईंको NEO खातामा लिंक हुनेछ।
नोट: तपाईं केवल एक प्रीपेड मास्टरकार्ड अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंसँग NEO को साथ हालको खाता छ।
के म NO को साथ हालको खाता खोल्न बिना कार्ड प्राप्त गर्न सक्छु?
दुर्भाग्यवस, यो विकल्प उपलब्ध छैन। कार्ड प्राप्त गर्न तपाईले NEO को साथ हालको खाता खोल्नु पर्छ।
नियमित स्प्यान्डर र सक्रिय स्प्यान्डर ट्यारिफ बीच के भिन्नता हुन्छ?
फरक कार्ड सीमा र शुल्कमा छ। सक्रिय स्प्यान्डर ट्यारिफले कम शुल्कको साथ उच्च सीमाको लागि अनुमति दिन्छ।
के म मेरो ट्यागलाई नियमित स्प्यान्डरबाट सक्रिय स्प्यान्डरमा अपग्रेड गर्न सक्छु?
हो, च्याट समर्थन को माध्यम बाट।
मेरो कार्ड कहिले डेलिभर हुन्छ?
तपाईंको अर्डर भएपछि, र तपाईंसँग शिपिंग शुल्कहरू कभर गर्नको लागि पर्याप्त रकमहरू छन्, कार्ड सामान्यतया अर्को कार्य दिन भित्र पठाइनेछ।
मानक डेलिभरी समय हाल २० काम दिनहरू सम्म छ।
इयु देशहरू र बेलायतमा एक्सप्रेस डेलिभरी business व्यापार दिन भन्दा बढी लिनुहुन्न।
अन्य देशहरूमा एक्सप्रेस डेलिभरी business व्यापार दिन लिन सक्दछ।
मेरो NEO खातासँग म कतिवटा कार्डहरू लिन सक्दछु?
व्यक्तिगत खाता: प्रति खाता होल्डर प्रति १ प्लास्टिक कार्ड र खाता धारक प्रति २ भर्चुअल कार्ड।
व्यापार खाता: अधिकतम cards कार्ड (भर्चुअल वा प्लास्टिक) प्रति एकल व्यवसाय खाता सम्म card कार्डधारकहरूको लागि।
मेरो एनईओ कार्ड कुन मुद्रामा जारी गर्न सकिन्छ?
यस समयमा कार्ड EUR मा जारी गरियो।
म कसरी मेरो कार्ड सक्रिय गर्न सक्छु?
तपाईं आफ्नो ग्राहक कार्यालयमा कार्ड सेटिंग्सबाट सिधा त्यस्तो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाइँ तपाइँको कार्ड ब्यालेन्स को एक शीर्ष अप संग अगाडि बढ्नु पर्छ।
सबै कार्ड प्रकार्यहरू सक्षम हुनेछन् चाँडो तपाईं एटीएम वा POS मा आफ्नो पहिलो लेनदेन बनाउन को लागी।
म कसरी आफ्नो एनईओ कार्ड टप-अप गर्न सक्छु?
तपाईंको ग्राहक कार्यालयमा कार्डहरू सेक्सन छनौट गर्नुहोस्, तपाईंलाई टप-अप गर्न आवश्यक कार्ड छान्नुहोस्, रकम र विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्, आवश्यक भएमा, र तपाईंको कोडको साथ लेनदेन अनुमोदन गर्नुहोस्।
लेनदेन तुरन्तै तपाइँको कार्डको ब्यालेन्समा प्रतिबिम्बित हुनेछ।
म मेरो कार्डको पिन कहाँ पाउन सक्छु?
तपाईं जहिले कार्ड सेटिंग्समा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं च्याट मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ।
के मेरो NEO कार्डमा सम्पर्क रहित सुविधा छ?
हो, सबै NEO कार्ड सम्पर्क रहित छन्।
सम्पर्क रहित भुक्तानीको लागि हालको सीमा कति छ?
सीमा व्यापारी भुक्तान प्रणाली द्वारा निर्देशित, व्यापारीको बैंक द्वारा सेट गरिएको छ। सामान्यतया सीमा २--25० EUR को बीच हुन्छ।
3D सुरक्षित के हो? के यो मेरो कार्डमा सक्षम गरिएको छ?
थ्रीडी सेकुर ई-वाणिज्य कार्ड लेनदेनको लागि अतिरिक्त सुरक्षा तह हुन डिजाइन गरिएको सुविधा हो।
सबै NEO कार्डहरू 3D सुरक्षित संग सुसज्जित छन्।
त्यहाँ कुनै कार्ड सीमा छ?
तपाइँ NEO कार्ड सीमा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
तपाईको कार्ड सीमा बढाउनको लागि कृपया हामीलाई च्याट वा मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्info@vn0.9ce.myftpupload.com
के म मेरो एनइओ कार्डबाट एटीएममा पैसा निकाल्न सक्छु?
तपाइँ तपाइँको NEO कार्डबाट कुनै पनि AMT मा पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ जुन मास्टरकार्ड समर्थन गर्दछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि त्यहाँ छन् LINK
के म मेरो एनइओ कार्डमार्फत अनलाइन भुक्तान गर्न सक्छु?
हो, तपाईं आफ्नो NEO कार्डको साथ अनलाइन भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि कार्डको ब्यालेन्स तपाईंले गर्न चाहेको लेनदेनको मात्रा भन्दा ठूलो छ।
मैले मेरो NEO कार्ड हराए। मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंले आफ्नो कार्ड हराउनुभएको छ भने तपाईंले तुरून्त हाम्रो कार्ड टीमलाई च्याट वा मार्फत सूचित गर्नुपर्नेछ info@vn0.9ce.myftpupload.com, र तिनीहरूलाई तपाइँको कार्ड ब्लक गर्न सोध्नुहोस्। टोलीले तपाईंलाई निम्न चरणहरूमा मार्गदर्शन गर्दछ।
मेरो कार्डको समयावधि सकिएको छ। मैले के गर्नुपर्छ?
तपाइँको कार्डको म्याद सकिने मिति भन्दा एक महिना अघि तपाइँ कार्ड प्रतिस्थापनको बारेमा सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ।
उही सूचनामा तपाईंलाई तपाईंको डेलिभरी ठेगाना संकेत गर्न सोधिनेछ।
नोट: कृपया यो दिमागमा राख्नुहोस् कि एक पटक तपाईले नयाँ कार्ड पाउनु भएपछि तपाईले यसलाई NEO वेब ग्राहक कार्यालय वा मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत सक्रिय गर्नुपर्नेछ।
के म मुद्रा खातामा लिंक गरिएको NEO कार्डहरू रोक्न सक्छु?
हो त्यसो गर्न, कृपया कुराकानी वा मा मार्फत हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीमा एक जांच पठाउनुहोस् info@vn0.9ce.myftpupload.com.
के एक कम्पनीले व्यापार खाता अन्तर्गत आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि कार्ड जारी गर्न सक्दछ?
हो विवरणका लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्